အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု - Micvd.com
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်အစိတ်အပိုင်းများသည်ကျော်ကြားသောနိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်မှဖြစ်သည်၊ AirTAC, panasonic, Siemens စသည်ဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
1 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အာမခံနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်သင့်လျော်သောပစ္စည်းကို သုံး. အသစ်တခုအသုံးမပြုဖြစ်တယ်, အားလုံးရှုထောင့်ရှိအစာချုပ်ထဲမှာသတ်မှတ်သောအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်နဲ့ performance တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
2, ထုတ်ကုန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းအောင်မြင်ရန်3ရက် installation နဲ့ဒီဘာဂင်ပြီးနောက်တပြင်လုံးကိုစနစ်ကအလုပ်အတွက်၎င်း၏မှန်ကန်သောလမ်းညွှန်မှုပြီးနောက်ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ကုမ္ပဏီအာမခံချက်။
3, အရည်အသွေးအာမခံချက်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအာမခံချက်စာချုပ်ထဲမှာသတ်မှတ်သော, ရောင်းသူရဲ့တာဝန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ installation ကိုဒီဘာဂင်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းချို့ယွင်းချက်ထုတ်လုပ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါင်းတို့နှင့်ထောက်ပံ့ဘို့၏ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပြတ်ရွေ့များနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်မဆိုချို့ယွင်းချက်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
4, လက်ခံမှုပြီးနောက် 12 လကြာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်မြေတပြင်လုံးစက်ရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်ကာလ။ အကယ်. အရည်အသွေးကိုအာမခံချက်ကာလ၌တွေ့, ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်စာချုပ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိ, သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ (စသည်တို့ကိုအလားအလာချို့ယွင်းချက်သို့မဟုတ်သည့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း, အပါအဝင်) ချွတ်ယွင်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခြင်း, ဝယ်ရောင်းသူကုသမှုအစီအစဉ်ရှေ့ဆက်ထားအရည်အသွေးအာမခံချက်ကာလအတွင်းကုန်စည်များ၏ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာနတို့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောစစ်ဆေးရေးလက်မှတ်သည်နှင့်အညီခွင့်ရှိသည်။
အလိုအလျှောက်ပုလင်းအဝတ်လျှော်စက်၏ CE လက်မှတ်
capping စက်၏ CE လက်မှတ်
ဖြည့်စက်၏ CE လက်မှတ်